5- kamida sumcad dilka uu Mahdi Guuleed ka dhaxlay sii’haya xilka raysal wasaaraha? - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/5- kamida sumcad dilka uu Mahdi Guuleed ka dhaxlay sii’haya xilka raysal wasaaraha?
5- kamida sumcad dilka uu Mahdi Guuleed ka dhaxlay sii’haya xilka raysal wasaaraha?
Tan iyo intii madaxweyne Farmaajo uu sii’hayaha xilka raysal wasaaraha Soomaaliya u magcaabay Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa waxa soo baxayay dhacdooyin qiimo dhac ku ah ninkan oo uu la kulmayay xilligan uu dalku ku jiro xaaladda kala guurka ah.
Arrimahan oo ay aad u dhaliilayaan siyaasiyiinta waawayn ee waddanka iyo dadka waxka fahamsan arrimaha maamul ee Soomaaliya, ayaa sii xoogaysanayay tan iyo maalintii uu Farmaajo qaabka sharci darrada ah ku magcaabay sii’hayaha xilka raysal wasaaraha.
Arrimaha aadka u xaasaasiga ah ee la tilmaamayo in lafjab ay ku yihiin Mahdi Guuleed, ayaa waxaa kamid ah.
In aan wax door ah laga siiciin hawlaha siyaasadeed ee culculus ee ka socda dalka, halka taas beddelkeeda lasheegayo in dhammaan shaqooyinka uu gacanta ku hayo taliyaha Hay’adda nabad sugidda Fahad Yaasiin oo loo arko in uu isticmaalayo awooddii uu lahaa raysal wasaaruhu.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa markii ugu horraysay magcaabay Xoghaya joogtada ah ee xafiiska raysal wasaaraha. Waxaana xoghaya lamagcaabay uu la wareegay guud ahaan awooddii xafiiska isaga oo xataa kullammo gaara laqaata madaxda iyo diblomaasiyiinta muhiimka ah.
Mahdi oo ku dedaalaya in uu ka faa’iidaysto fursadda kala guurka ah, ayaa lasheegay uu shaqaalaha dawladda si sharci darro ah ugu daray dhowr dhallinyaro ah oo ay hayb dhaw wadaagaan, waxaana taasi ay abuurtay in ay aad uga caroodaan dhallinyarada kasoo jeedda Somaliland gaar ahaan beesha Isaaq weliba beesha Garxejis oo uu sii kala dhawaystay.
Mahdi, ayaa kasoo muuqday xidhitaanka shir aanu waxba kala socon oo ilaa bilawgii aan loogu yeerin ,waxna aanu ka ogayn qodobada laga soo saaray, waxaan tallaabadaas loo arkaa bahdil lagu sameeyay.
5. Mahdi ayaa muddii uu joogay wax la amray in uu meelmariyo Hindise sharciyeedyo iyo guddiyo ay sharci darro tahay in ay meel mariso xukuumadda aan xasaanad ka haysan baarlamanka. Qodobadaas iyo guddiyadaas ayaa waxba kama jiraan noqonaya markasta oo isbedel uu ka dhaco dalka.
Wasiir kuxigeen lagu toogtay degmada Jowhar.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo la sii dardaarmay raysal wasaaraha uu Farmaajo magcaabay.
Marwada 1aad ee Dalka oo la kulantay Museveni